कम्प्युटर भन्दा धेरै मेमोरी भएको स्मार्टफोन | Lek Besika Bhakaharu - Online News Portal
कम्प्युटर भन्दा धेरै मेमोरी भएको स्मार्टफोन
स्मार्टफोन निर्माताहरु आफ्नो डिभाइसमा एक्सक्लूसिभ फिचर्स तथा स्पेसिफिकेसन्स दिनका लागि कडा मेहेनत गरिरहेका हुन्छन् ।
यस्तै नयाँ फिचर्सको सूचिमा सामेल हुनेवाला छ, हुवावेको पी २० स्मार्टफोन ।
यसअघि नै सार्वजनिक भएको खबर अनुसार यस स्मार्टफोनमा तीनवटा मुख्य रियर क्यामरा हुनेछन् । हालै यस फोनको बारेमा अर्को नयाँ तथ्यको पनि खुलासा भएको छ ।
समाचार अनुसार यस स्मार्टफोनमा ५ सय १२ गिगाबाइटको इनबिल्ट स्टोरेज हुनेछ । अर्थात् यस स्मार्टफोनका प्रयोगकर्ताले अब एउटा कम्प्युटरमा हुनेजत्तिकै स्टोरेज आफ्नो गोजीमा अटाउन सक्नेछन् ।
यदि हुवावेले ५१२ जिबी मेमोरीयुक्त स्मार्टफोन ल्याएमा अन्य स्मार्टफोन निर्माताले पनि यही ट्रेण्ड अपनाउने अपेक्षा गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष एप्पलले फेस आइडी फिचरयुक्त आइफोन ल्याएसँगै अन्य केही स्मार्टफोन कम्पनीले त्यसको सिको गरेका थिए । फूल स्क्रिन डिस्प्लेको मामिलामा पनि यस्तै भयो । एलजी फूल स्क्रिन डिस्प्ले प्रविधियुक्त स्मार्टफोन ल्याउने पहिलो कम्पनी थियो । अहिले त बजेट स्मार्टफोनमा पनि यो फिचर हुने गरेको छ ।
के नरेन्द्र मोदीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन फेसबुकले मद्दत गरेको थियो त ?
फाेटाेकाे अश्लिल भिडियाे बनाउदै ब्ल्याकमेल गरेर पैसा माग्ने पक्राउ
फेरी बन्यो अर्को जोडी भाइरल [कारण यस्तो छ] 10 months ago
अर्को चुनावमा आउँदा गत वर्षको चुनावमा जस्तो धुलोमैलो सहनु नपरोस्। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ 10 months ago
दुई युवतीको शानदार डान्स, भयो रातारात भाइरल (हेर्नुहोस भिडियो) 10 months ago
प्रधानमन्त्री ओलीको गर्जन: जङ्गलमा दुइटा बाघ छन-राजतन्त्र फर्काउने सपना नदेखे हुन्छ (भिडियो सहित) 10 months ago
राजा ज्ञानेन्द्र शाह नाच्दा हल्लिने यो कस्तो गणतन्त्र हो ?: राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा 10 months ago
‘राजा आउ देश बचाउ’ भन्दै हजारौं युवा सडकमा,नारायणहिटी पस्न खोज्दा झडप (भिडियो) 10 months ago